Faafaahin Qaraxii ka dhacay Muqdisho. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Faafaahin Qaraxii ka dhacay Muqdisho.
May 22, 2019 admin304
Faafaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha dhimashada & midka dhaawaca ah ee ka dhashay qarax gaari loo adeegsaday oo maanta barqadii ka dhacay bar Koontarool Ciidamada NISA ay ku leeyihiin nawaaxiga Godka Jilacow.
Dadka goobjoogayaal ah ayaa xaqiijiyay inay arkeen dhimashada illaa 5 ruux oo askar u badan, kuwaasi oo yaalay goobta qaraxa uu ka dhacay.
Dadka dhintay waxaa ku jiray Sarkaalad lagu magacabo Faay Cali Raagge & Saygeeda oo wada socday, oo ka tirsanaa ciidanka Xoogga Dalka, islamarkaana gaari ay saarnaayeen goobtaasi maraayay.
Sidoo kale waxaa qaraxa ku dhaawacmay laba Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka Somaliya, kuwaasi oo gaadiidkii ay la socdeen meesha uu taagnaa xilliga qaraxa uu dhacaayay. Xildhibaanada dhaawacmay ayaa magacooda lagu sheegay Xildhibaan Maryan Cariif iyo Xildhibaan Shabeel.
Qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo xiran.